कुन राशिका मानिसले के मन्त्र जप्दा हुन्छ धन प्राप्ति ? - Nepal Insider
Home/समाचार/कुन राशिका मानिसले के मन्त्र जप्दा हुन्छ धन प्राप्ति ?
हरेक व्यक्तिले सुखी जीवनका लागि धन प्राप्ति गर्न मेहनत गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको समयमा त धन अर्थात पैसा एक आधारभूत आवश्यकता नै बनिसकेको छ । त्यसैले हिन्दी भाषामा एक भनाइ पनि छ – ‘बाप बडा ना भैया, सबसे बडा रुपैयाँ !’
धन कमाउने आशले प्रदेशिएका पाण्डे ..फर्किए रातो बाकसमा
कालोपुलमा श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने, श्रीमान पक्राउ